Warar - Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Si Buuxda Ugu Shaqeynaya Dhuunta Dabka ee Kuuriya
Sax Machine Fiber Laser Goynta
Si buuxda u Automatic Fiber Laser Jarida Tube Machine Solution Waayo Fire Pipeline In Korea
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Si Buuxda Oo otomaatig ah Loogu Tala Galay Dhuunta Dabka ee Kuuriya
Iyadoo xawaaraha ee dhismaha magaalooyinka smart meelo kala duwan, difaaca dabka dhaqameed aan la kulmi kartaa ka hortagga dabka baahida magaalooyinka smart, iyo ilaalinta dabka caaqil si buuxda u isticmaalaan internet of technology wax si ay u buuxiyaan shuruudaha "qalabaynta" ee ka hortagga dabka iyo gacan ku haynta ayaa u soo muuqday. dhismaha difaaca dabka smart ayaa helay dareenka weyn iyo taageero ka dalka inay meelo iyo waaxaha.
dhismaha nabdoonaanta dabka ku saabsan yahay qof kasta. Waayo, dhismaha magaalooyinka smart, dhismaha nabadgelyada dabka waa mudnaanta sare ah. Sida loo dhiso nidaamka badbaadada dabka caqli badan si ay u haboon horumarinta magaalooyinka smart waa dhibaato in maamulayaasha magaalada waa inay tixgeliyaan.
Sida la wada ogsoon yahay, haddii ay tahay warshadaha ee smart ilaalinta dabka ama warshadaha ilaalinta dabka dhaqanka, qayb ka ugu muhiimsan ee nidaamka oo dhan difaaca dabka waa dhuumaha ilaalinta dabka.
Shuruudaha Customer: Laser sixitaanka iyo jarida on tuubooyinka ah.
Xalkeenna: Waxaa lagu daray nidaam calaamadeeye ah oo kujira kumbuyuutarka guntin ee otomaatiga ah si loo dhammaystiro calaamadeynta tuubooyinka ka hor inta aan la goyn.
Tan iyo dhuumaha ilaalinta dabka had iyo jeer waa in gobolka guurto ah, looga baahan yahay dhuumaha adadag yihiin, iyo baahida dhuumaha in ay u adkeysan cadaadiska, iska caabin ah daxalka iyo iska caabin heerkulka sare. Sida caadiga ah qalabka biibiile dab used waa: bixinta biyaha tuubooyin spheroidal bir ah ee kabka, iyo biibiilaha copper, tuubooyin bir, iyo biibiilaha, waxaaga, gool, feeray iwm
P2060A waa qalab ah oo khibrad leh, waayo, jarida tuubooyinka. Waxaa la gooyaa hal mar oo uu shahaadada sare ah qalabaynta, taas oo si weyn u soo hagaagaysa ka oolnimada-soo-saarka.
In wax la dirirka ah, dab ugu aasaasiga ah deminta xarunta nidaamka damiya dabka waa in kooban biibiile pre-Abuurtay, wadajir dabacsan, welded rakiban outlet iyo madaxa damiya, oo isku weheliso goynta, feer iyo alxanka si ay u qabtaan oo ay shaqo asalka.
P2060A mishiinka laser automatic goynta biibiile waa qalab gaar ah-dhamaadka sare tube goynta laser. Waa ay fududahay in ay ku shaqeeyaan, sare iswada, goynta aadka saxda ah, oo ku habboon baahida baaxad weyn oo soo saarka warshadaha iyo qaababka kale oo badan oo horumarsan, inuu noqdo dooqa koowaad ee warshadaha tuubada qalabka. wax soo saarka ayaa taxane in ay la kulmaan noocyo kala duwan oo goynta iyo dejinta kala duwan dhererka iyo shuruudaha goynta waayo dhexroor biibiile oo kala duwan, sidaas bixinta adeeg shakhsi si users ka badan duurka ilaalinta dabka.
magaabay wiil iyo biibiilaha laser biraha oofin karin goynta dekedda iyo goynta dusha biibiile on tuubooyin bir ah. Waxaa si toos ah jari karaa tuubooyinka wareega tuubooyinka steel, tuubooyinka copper, tuubooyinka aluminium, bir tuubooyinka warshadaha, iwm .; goynta wareega tube jeexdin, Bransilav tube wareegsan, feedh tube wareegsan, hannaankii goynta tube wareega iwm
Golden Vtop tuuboyinka Laser magaabay wiil P2060A Maqaallo
Golden Laser Mashiinka goynta tube waxaa la soo saaray sanadkii 2012, bishii December 2013 set ugu horeysay ee YAG Mashiinka goynta tube la iibiyey. In 2014, mashiinka goynta tube la galay warshadaha qalabka taam / gym. In 2015, mashiinada badan oo fiber laser goynta tube waxaa soo saaray oo codsatay in warshado kala duwan. Oo haatan waxaan mar walba horumarinta iyo hagaajinta waxqabadka Mashiinka goynta tuubada.
Machine P2060A 3000w Technical Halbeegyada
tirada model P2060A
Tube / dhererka tuuboyinka Ugu badnaan 6m
Tube / tuuboyinka size Φ20mm-200mm
Tube / miisaanka loading tuuboyinka Max 25kg / m
size Bushqad Max 800mm * 800mm * 6000mm
miisaanka Bushqad Ugu badnaan 2500kg
il laser Fiber 3000W
korontada Electric AC380V 60Hz 3P
Total isticmaalka awoodda 32KW
P2060A Machine Muunado Jarida Bannaanbaxa
Customer P2060A Machine In The Korea ee Factory
P2060A Machine Waayo Goynta Fire Pipeline Demo Video